Home » Lahatsoratra farany farany » Vaovao Mafana » Israel Vaovao Vaovao » Nisokatra indray ny Isiraely ho an'ny mpandeha iraisam-pirenena
Airlines • Aviation • Vaovao Mafana • Vaovao momba ny fitsangatsanganana • Israel Vaovao Vaovao • Vaovao • Safety • Fitaterana • Travel Wire News
Sambany tao anatin'ny valo ambin'ny folo volana mahery, ireo mpandeha avy any Etazonia sy Kanada vita vaksiny avy any Etazonia sy Kanada dia raisina an-tanan-droa hiditra an'i Israely sy hijery ny kolontsaina manankarena, ny tantara ary ny tontolo mahazendana ao amin'ny firenena.
Nanokatra indray ny sisintany ho an'ny mpitsidika amerikana sy kanadiana i Israely.
Ny torolàlana vaovao ho an'ny fidirana dia mitaky fanaovana fitiliana PCR 72 ora alohan'ny sidina hivoaka sy fanaovana fitiliana PCR rehefa tonga any Israely miaraka amin'ny confinement.
Ny Minisitry ny Isiraely dia namorona ny drafitra voalaza etsy ambony izay nankatoavin'ny kabinetran'ny COVID ary hanan-kery ny 1 Novambra 2021.
The Ministeran'ny fizahantany Israel dia nanambara fa manomboka androany, ireo mpizaha tany avy any Etazonia sy Kanada efa vita vaksiny dia afaka manohy ny dia rehetra mankany Israel. Taorian'ny nanombohan'ny fandaharan'asa fanokafana indray ny mpanamory tamin'ny volana Mey 2021, izay nahafahan'ny vondrona mpitety faritany voafantina hiditra tao amin'ny firenena, dia afaka mitsidika an'i Isiraely izao ny mpandeha rehetra vita vaksiny taorian'ny fanakatonana lava noho ny fameperana COVID-19.
"Ny filazana fa faly izahay fa misokatra indray ho an'ny mpanao dia lavitra i Isiraely ankehitriny dia tsy misy dikany," hoy i Eyal Carlin, Kaomisera momba ny fizahantany any Amerika Avaratra. “Nanao dingana mahatalanjona i Israely mba hiarovana ny vahoakany sy ny mpitsidika azy ary mirehareha amin'ny fiantohana ny dia azo antoka sy tsy hay hadinoina izahay. Miaraka amin'ny taham-pahafahan'ny vaksiny lehibe sy ny fahafahana tsy misy fiafarana ho an'ny hetsika ivelan'ny trano, dia mazoto mandray vahiny amin'ny sandry misokatra izahay - mazava ho azy, amin'ny halavirana ara-tsosialy azo antoka. ”
Ny praiminisitra Israeliana Naftali Bennett miaraka amin'ireo Minisitra maro hafa ao amin'ny firenena (Fizahantany, Fahasalamana, Fitaterana, sns.), dia niara-nivory ary nanangana ity drafitra manaraka ity izay nankatoavin'ny kabinetran'ny COVID ary manan-kery anio 1 Novambra - miaraka amin'ny Ny fivoarana sy ny variana COVID vaovao dia araha-maso akaiky.
“Efa niandry an'ity fotoana ity izahay, hamerenana ireo mpandeha iraisam-pirenena ho eto amin'ny firenentsika, efa ela be”, hoy i Yoel Razvozov, Minisitry ny Fizahantany ao Israely. "Faly izahay mizara ny firenentsika amin'ny rehetra indray ary faly aho miara-miasa akaiky amin'ny praiminisitra Naftali Bennett miaraka amin'ireo minisitra hafa ao amin'ny firenena mba hiantohana ny fiverenana amim-pisainana sy azo antoka amin'ny fizahan-tany."
Hatramin'izao, ny torolàlana momba ny fidirana dia ahitana:
Manao fitiliana PCR 72 ora alohan'ny sidina hivoaka, mameno ny fanambaran'ny mpandeha, ary manao fitiliana PCR rehefa tonga any Israely (mila manao confinement any amin'ny hotely iray mandra-piverin'ny valiny na 24 ora - ny kely kokoa amin'ny roa).
Mba hidirana ao amin'ny firenena dia tsy maintsy:
Efa vita vaksiny fatra roa amin'ny vaksiny Pfizer na Moderna farafahakeliny 14 andro mialoha ny andro hidirana ao Israely (14 andro dia tsy maintsy lasa hatramin'ny nahazoana fatra faharoa rehefa tonga tany Israely, fa tsy mihoatra ny 180 andro taorian'ny nandaozany an'i Israely - izany hoe, raha enim-bolana lasa izay ny fatra faharoa dia mila ny tifitra booster ianao vao miditra).
Ireo izay nahazo ny fatran'ny vaksiny booster, ary farafahakeliny 14 andro no lasa hatramin'ny nahazoana azy, dia afaka miditra ao Israely.
Efa voatsindrona fatra iray amin'ny vaksinin'i Johnson & Johnson fara-fahakeliny 14 andro mialoha ny andro hidirana ao Israely (14 andro dia tsy maintsy lasa hatramin'ny nahazoany fatra faharoa rehefa tonga tany Israely, fa tsy mihoatra ny 180 andro taorian'ny nandaozany an'i Israely - izany hoe, raha enim-bolana no lasa hatramin'ny fatrao faharoa, dia mila ny tifitra booster ianao vao miditra).
Sitrana tamin'ny COVID-19 ary mampiseho porofo momba ny valin'ny fitsapana NAAT tsara, fara fahakeliny 11 andro mialoha ny andro hidirana ao Israely (tsy mihoatra ny 180 andro taorian'ny nandaozany an'i Israely).
Sitrana tamin'ny COVID-19 ary nahazo fatra iray farafahakeliny amin'ny vaksiny nankatoavin'ny OMS.
Hita ny torolalana lalina ETO. Ankoatra izany, tsidiho azafady https://israel.travel/ ho an'ny fanavaozana rehetra momba ny protocole fidirana sy ny valiny ho avy amin'ny FAQs.
Raha mila fanazavana fanampiny momba ny dia mankany Israely na manomana ny dianao dia tsidiho https://israel.travel/. Raha te hahazo aingam-panahy, araho ny Minisiteran'ny Fizahantany Israeliana Facebook, Instagram, ary Twitter.